पोखरामा कुकुर पाल्न अब महानगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
प्रतिकुकुर एक सय रुपैयाँ शुल्क, दुई दिनमा १४० दर्ता
ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुकुरधनीलाई ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
पोखरा — सेतो र कालो छिर्केमिर्के कुकुर डोर्‍याएर अनु सिग्देल दम्पती शुक्रबार पोखरा–८ को सिर्जनाचोकमा रहेको वडा कार्यालय पुगे । एक वर्षअघि अनलाइनबाट १६ हजार रुपैयाँमा मगाइएको डाल्माटिएन प्रजातिको कुकुर दर्ता गर्न उनीहरू वडा कार्यालय पुगेका हुन् ।
महानगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपल्ट कुकुरको दर्ता अनिवार्य गरेको हो । महानगरको छैटौं नगरसभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७६ पारित गरेको थियो । उक्त ऐनमा कुकुरपालकले अनिवार्य दर्ता गरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । ऐन पारित भएको दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘कुकुरको तथ्यांक राख्नु उपयुक्त हो,’ पोखरा–८ शान्तिमार्गकी सिग्देलले भनिन्, ‘दर्ताको निहुँमा राजस्व मात्रै उठाउने हो भने राम्रो होइन ।’
महानगरपालिकाले बिहीबारबाट आफ्ना १० पशु सेवा केन्द्रमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्र नभएको वडा नम्बर ८ मा भने बिहीबार र शुक्रबार क्याम्प राखिएको थियो । कुकुरपालकले एक सय रुपैयाँ बुझाएपछि कुकुर दर्ता तथा पाल्ने अनुमतिपत्र पाउँछन् ।
महानगरले पशुधनीको नाम, ठेगाना, घर नम्बर, फोन नम्बर, कुकुरको जाति, जात/नश्ल, उमेर, बोलाउने नाम, रङ र लिंगको रेकर्ड राख्छ । अनुमतिपत्रसँगै बेल्टमा ट्याग झुन्ड्याइन्छ । ऐनबमोजिम दर्ता भएका कुकुरलाई छाडा छोड्न नपाइने, घरबाहिर दिसापिसाब गराउन नहुने प्रावधान छ । ऐनविपरीत कार्य गरे कुकुरपालकलाई ५ देखि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छाडा छोडिएका कुकुर कसको हो भन्ने ट्यागबाट पत्ता लगाउने र जरिवाना गरिने वडा ८ का अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले बताए । ‘कुकुर पालेर बूढो भएपछि सडकमा छोडिदिने समस्या छ । अर्को भनेको कुकुर डोर्‍याउँदै ल्याएर सार्वजनिक स्थलमा दिसापिसाब गराउँछन्,’ उनले भने, ‘दर्ता प्रक्रियापछि अब यो समस्या आउँदैन ।’
पशु सेवा शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारीका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार महानगरभित्र १ सय ४० कुकुरको दर्ता भएको छ । वडा नम्बर ८ मा मात्रै ७८ पशुधनीले कुकुर दर्ता गरेका छन् । बिहीबार सुरु भएदेखि निरन्तर दर्ता प्रक्रिया चल्ने उनले बताए । ‘दर्ता गरेर कुकुरलाई व्यवस्थित रूपमा पाल्दा तथ्यांक अभिलेखीकरण प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘रेविजविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको/नलगाएको छुट्याउन सजिलो हुन्छ । नलगाएको भए ताकेता गर्छौं ।’
पशु सेवा शाखाले छाडा कुकुरलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान पनि चलाएको छ । सेप्टेम्बर २२ मा विश्व रेविज दिवस मनाउने क्रममा पशुसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको सहकार्यमा अभियान थालिएको हो । अभियानअन्तर्गत छाडा कुकुरलाई समातेर भ्याक्सिन लगाउने, बिरामी भए उपचार गरेर छाड्ने गरिएको शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । असोज १२ पछि कुकुरको निःशुल्क बन्ध्याकरण सेवा पनि शाखाले दिनेछ । अभियानमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्की, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखरा, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसियसन (नेब्ला), नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ (नेल्टा) र हिमालय एनिमल रेस्क्यु ट्रस्ट (हार्ट) को सहभागिता छ ।
पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला प्रमुख केदारराज पाण्डेका अनुसार रेविजका कारण नेपालमा हरेक वर्ष २ सय जनाको मृत्यु हुन्छ । यसको लक्षण देखिएपछि बचाउन सकिँदैन । फ्याउरो र स्यालबाट कुकुरमा रेविज सर्छ भने छाडा कुकुरबाट घरपालुवामा सर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०९:५६
‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्ताबेज’ लेखनको कथा
किताबले मदन पुरस्कार नै पाउला, छापिएका सबै प्रति बिक्लान् र दोस्रो मुद्रण गर्नुपर्ला भन्ने ६५ वर्षीय भगिराज इङ्नामले सोचेका पनि थिएनन् । उनको किताब अब वितरक र प्रकाशन गृहले मात्र माग्न थालेका छैनन्, किन्न मान्छे घरमै आउन थालेका छन् ।
संकलनताका उनी फलानो गाउँमा फलानाको घरमा यस्ता कागजात छन् अरे भनेर सुनेपछि त्यतै कुद्थे । त्यहाँको कागजात खोतलखातल पारेर नजिकैको सदरमुकामसम्म जान्थे । स्क्यानिङ गर्थे । मोबाइल र क्यामेराले फोटो पनि खिच्थे ।
आश्विन ९, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — बिहीबार साँझतिर भगिराज इङ्नामलाई कसैले सुनाइदियो– तपाईंको किताबले त मदन पुरस्कार पायो नि ! सुरुमा त उनले पत्याएनन् । मदन पुरस्कार गुठीको विज्ञप्ति नै देखेपछि भने उनलाई पत्याउन करै लाग्यो । तीन सय एक वर्ष (वि.सं. १७१९–२०२०) अवधिका दस्ताबेज संग्रह ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्ताबेज संग्रह’ का लेखक भगिराजले सुनाए, ‘हर्ष पनि भयो, अनौठो लागेजस्तो पनि ।’
अक्सर शान्त रहने उनको फोन मदन पुरस्कार घोषणपछि बजेको बज्यै छ । यस्तो फोनमा बधाई दिने शुभेच्छुक मात्र छैनन्, किताब पसलवाला, पुस्तक वितरक र निजी प्रकाशन गृह पनि छन् । सात वर्षको कुँदकुँदपछि आफैंले १३ लाखभन्दा धेरै रकम खर्चेर उनले यो किताब जम्मा एक हजार प्रति निकालेका थिए ।
पुरस्कार घोषणापछि त नयाँदेखि पुराना प्रकाशन गृहसम्मले उनलाई किताबको नयाँ संस्करण छाप्न दिनुस् भनेर अफर गरिरहेका छन् । फागुन २३ गते विमोचन भएको यो किताब उनले अनेकतिर भनेर चार सय प्रति जति मात्र बेच्न सकेका थिए । पुस्तक मदन पुरस्कारको ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेपछि भने एक साता पनि नहुँदै अरू तीन/चार सय बेचे । बिहीबार पुरस्कारको घोषणापछि घरमै किताब किन्न मान्छे आउन थालेका छन् ।
२०७० बाट किताब लेख्ने सुर थालेका उनले झन्डै सातवर्षे अवधि सेन र शाह राजाहरू तथा राणा शासकबाट पल्लो किरातका लिम्बू, राई, याक्खा, आठपहरिया तथा लोहरूङलाई सुब्बा, राय, राई, रायगिरी र मझिया सम्बोधन गर्दै जारी गरेको स्याहामोहर, लालमोहर, कस्यरुक्का, कस्यपत्र र इस्तिहार संकलन गर्नमा खर्चिए । ३४ वर्ष ८ महिना सरकारी सेवामा खटिएका भगिराज जागिरबाट अवकाश मिल्नेबित्तिकै पाको उमेरको जोस निकालेर दस्ताबेज संकलन यात्रामा निस्किएका थिए ।
२०७० सालमा तेह्रथुम जिल्लाको सुब्बाङ्गी प्रथा नामक पुस्तक सहलेखन गरेका र २०७५ सालमा लिम्बू जातिको इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका उनी लिम्बुवानको सिंगो इतिहास उधिन्ने ध्याउन्नमा पहिलेदेखि नै थिए । २०७१ मा धनकुटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सरकारी काममा गाउँतिर चहार्थे । त्यतिबेलैदेखि हो उनले ऐतिहासिक दस्ताबेज जम्मा गर्न थालेको । करिब सात वर्षे अवधिमा उनले ७८ वटा सक्कल लालमोहर र ३ सय ९५ वटा अभिलेख जम्मा पारे । जसमा सबैभन्दा पुरानो वि.सं. १९७१ को छ भने सबैभन्दा पछिल्लो वि.सं. २०२० को ।
२०३८ मा लोक सेवा लडेर अधिकृत पदमा नाम निकाल्दा उनले इतिहासकार बालचन्द्र शर्मादेखि बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ र इमानसिंह चेम्जोङद्वारा लिखित इतिहासका सबैजसो किताब खर्लप्पै पारे (पढे) । उनले सुनाए, ‘सरकारी जागिर खाने इच्छाले मैले यति मन लगाएर इतिहास पढें कि त्यतिबेलाको पढाइ अहिले पनि सम्झिन्छु ।’ त्यही पढाइले उनको मनमा इतिहासबारे जान्ने, बुझ्ने र खोतल्ने बीउ रोपिदियो ।
यही पढाइले उनलाई लालमोहरको महत्त्व पनि बुझाइदियो । लिम्बुवानका लिम्बू, राई, याक्खा, आठपहरिया तथा लोहरूङलाई सुब्बा, राय, राई, रायगिरी र मझियालाई तत्कालीन शासकले लेखिपठाएका कागजात इतिहासको प्रथा, परम्परा र त्यतिबेलाको समाज बुझाउने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुन सक्छन् भनेर उनलाई त्यतिबेलै लागेको थियो । उनले बुझेका थिए, पुराना ऐतिहासिक दस्ताबेज लालमोहरिया वा पुराना सुब्बाहरू, फुटी सुब्बाहरू, राई पगरी र इतिहासमा रुचि राख्नेहरूसँग छन् । किताब लेख्ने सुर कसेपछि उनी घना लिम्बू बस्ती भएका संखुवासभा, पाँचथर, धनकुटा, मोरङलगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाका अनेकन गाउँ पुगे, झन्डै डेढ सय त मान्छे नै भेटे । त्यसका अलावा राष्ट्रिय अभिलेखालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख शाखा, परराष्ट्र मन्त्रालयको साविक जैसीकोठासम्म चहारे ।
संकलन ताका उनी फलानो गाउँमा फलानाको घरमा यस्ता कागजात छन् अरे भनेर सुनेपछि त्यतै कुद्थे । त्यहाँको कागजात खोतलखातल पारेर नजिकैको सदरमुकामसम्म जान्थे । स्क्यानिङ गर्थे । मोबाइल र क्यामेराले फोटो पनि खिच्थे । उनले सुनाए, ‘पुराना कागजात जतनसाथ खोलेर अक्षर बुझिने गरी प्रतिलिपि उर्तानु साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ ।’ उनले महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको प्रतिलिपि हराउला वा प्राविधिक कारण नमिलेर भनेजस्तो नहोला भनेर मोबाइल र क्यामेराले खिच्ने अनि स्क्यानिङ पनि गर्ने काम सँगसँगै गरे ।
कतिले त उनलाई पुराना दस्ताबेज लगेर बेचीवरी पैसा कमाउँछ भनेर शंका गरे । २०७५ फागुन ३ को एउटा नमिठो घटना उनको सम्झनामा अहिले पनि ताजै छ ।उनी तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाका एक पुरानिया सुब्बाका सन्तानसँग केही दस्ताबेज छ भन्ने सुनेर घर खोज्दै पुगे । उनको कुरा सुनेर ती मान्छेले भने– ‘मैले त काम नलाग्ने चिज होलान् भनेर फाल्नै लागेको थिएँ ।’
उनले ती कागजपत्र आफूले लगेर प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा लगेर राख्ने बताए । दस्ताबेज लिएर उनी गाउँ नजिकैको होटलमा आएर बास बसे । भोलिपल्ट बिहानै ती मान्छे आएर आफूले दिएका दस्ताबेज फिर्ता मागे । भगिराजले सुनाए, ‘कसैले ती मान्छेलाई ती कागजात बेचेर करोडौं आउने भनेर लोभ जगाइदिएछ ।’ ती मान्छेले ती कागजात नलिई नछाड्ने भएपछि उनले हत्तपत्त मोबाइलले फोटो खिचे । उनले थकथकी सुनाए, ‘सदरमुकाम लगेर राम्ररी स्क्यानिङ गर्न पाएको भए ती कागजात प्रस्ट बुझिन्थे ।’
स्थलगत अध्ययनमा उनले अमाली सुब्बाहरूमा परेका फिराद, उजुरी पत्रहरू, सुब्बा र रैतीबीच भएका लिखतहरू, मुचुल्काहरू, कम्पु पल्टनमा रकम दाखिला गरेका रसिदहरू, सर्पट जाँचबाट जारी भएका कस्यपत्रहरू र अड्डा अदालतबाट जारी भएका पत्रहरूसमेत भेटे । उनले जम्मा पारेका दस्ताबेजमा कोही देवनागरी लिपिमा त कोही मैथिली, हिन्दी र कोही लिम्बू भाषामा लेखिएका छन् ।
भगिराजले किताबमा संकलित दस्ताबेजले बुझिँदै आएको लिम्बुवानको इतिहासबारे केही नयाँ तथ्य उद्घाटित गरेको बताए । जस्तो कि, किरातीलाई शाह राजाले हिन्दू बनाएको भन्ने भाष्यलाई उनले संकलन गरेको दस्ताबेजले अस्वीकार गर्छ । उनले भने, ‘केही किरातीले भने सेन कालदेखि नै हिन्दूधर्म मानेको देखिन्छ ।’ अर्को तथ्य पनि प्रचलनमा छ, पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा जारी गरेको लालमोहरपछि मात्र लिम्बू भए । उनले भने, ‘दस्ताबेजले त वि.सं. १८२४ को सेन कालदेखि नै लिम्बू प्रचलनमा देखिन्छ ।’
यो दस्ताबेज संग्रह इतिहासका अनेकन तथ्यको प्रमाणिकताका निम्ति मात्र उपयोगी छैन, शासकहरूले गर्ने व्यवहार, लिम्बुवानको जाति र प्रथागत व्यवस्थाका अनेहन पहलुहरू खोतल्न पनि सहयोगी छ । जस्तो कि, वि.सं. १९७२ मा चन्द्रशमशेरले पहिलो विश्वयुद्ध लड्नका निम्ति इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती हुन् यो–यो जात जानु भनेर तोकेरै जारी गरेको इस्तिहार पुस्तकमा छ । वि.सं. १८७२ मा नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्धमा पूर्वका राईहरू हातहतियार लिएर विजयपुर किल्लामा पुगेकोदेखि वि.सं. १९१२ को नेपाल–तिब्बत युद्धमा नेपालले ओलाङचुङगोला, केरुङ, कुतीलगायत स्थानमा आक्रमणमा सहभागी हुन तात्कालिक शासकले सुब्बाहरूलाई इस्तियार जारी गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ । तत्कालीन शासकले ढाल, तरबार र बन्दुक लिएर उपस्थित हुन सुब्बाहरूलाई इस्तियार जारी गरेको प्रमाण पुस्तकले बोल्छ ।
वर्षौंको खोजबिन र महिनौं लामो दौडधुपपछि सारा दस्ताबेज संकलन गरेर बल्ल भगिराजको पुस्तक लेखनको खास काम सुरु भएको थियो । उनले भने, ‘महिनौं लगाएर दस्ताबेजका अक्षर हातैले कापीमा लेखें । नबुझेका अक्षर र शब्द बुझ्न अनेकन इतिहासकारको मद्दत लिएँ ।’ सबै सामग्री सारेपछि उनी अनामनगरका कैयौं साइबर क्याफेमा धाएर टाइप गराए । उनले भने,
‘बुढ्यौलीले छोएर हो कि किन हो, म छिटो टाइप गर्नै सक्दिनँ । बल गरेर गरे पनि एकैछिनमा कुम दुखिहाल्छ ।’ उनको अनुमानमा टाइप गरेका डकुमेन्ट सच्याउँदै प्रिन्ट गर्दै बारम्बार साफी गर्दा नै प्रिन्ट खर्चमा एक लाख जति सकियो होला । लालमोहरमा एउटै शब्द कतै हृस्व लेखिएको छ । कतै दीर्घ लेखिएको छ । दमाई, दमै, दमाई र दमायी जस्तो एउटै शब्द फरकफरक तरिकाले लेखिएको छ ।
उनले भने, ‘मैले दस्ताबेजमा जस्तो लेखिएको छ, त्यस्तै शब्द साफी गरे । सम्पादन सकिएपछि उनी केही निजी प्रकाशन गृहमा पनि धाए । केहीले बढेमानको किताब देखेर आँटेनन् । केहीले भने उनलाई दस प्रतिशत रोयल्टी दिने र ५० प्रति किताब दिने बताए । तर यस्तो प्रस्तावमा उनको मन अडिएन । क्यानडामा रहेका छोराबुहारीले आडभरोसा दिएपछि उनी आफैं किताब छाप्ने आँटमा देखिए । ‘छोराबुहारी नै प्रकाशक भए । उनीहरूले नै किताब छाप्दा लाग्ने ९/१० लाख खर्च व्यहोरिदिए ।’
यसरी छापेर प्रकाशनमा आएको किताबले पुरस्कार पाउला, छापिएका सबै प्रति बिक्लान् र दोस्रो मुद्रण गर्नुपर्ला भन्ने उनले सोचेका पनि थिएनन् । ६५ वर्षीय भगिराजले दोधारको कुरा सुनाए, ‘अब जम्मा ४०/४५ प्रतिभन्दा बाँकी छैन । कसलाई दिनु, कसलाई नदिनु !’
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०९:५०